Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation China Manufacturer
Incazelo:Umshini we-T-shirt wephrinta,I-T-Shirt Embala Umbala Omhlophe,Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation
Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation
Singabakhiqizi be- T-Shirt bamukela i-OEM, sinenguqulo entsha futhi esetshenzisiwe ongayikhetha. Lokhu Iphrinta T-Shirt Machine umshini wokupaka umshini wokunyathelisa wedijithali ephezulu. Akuhambisani nanoma yimiphi imikhawulo yempahla, ungakwazi ukuphrinta kuma-T-shirt nganoma yiziphi izithombe, futhi uvale ezithombeni zangempela kuze kube sezingeni eliphezulu. Asikho isidingo sokwenza ipuleji yokushicilela, umbala omuhle futhi ocebile, ongenamandla wokulwa, olwa-ultraviolet, osebenza kalula, ophrinta izithombe ngokushesha, ngokugcwele ngokuhambisana nezindinganiso zokunyathelisa ezimbonini. Lo Mshini Wokushicilela I-Shirt ye-Sublimation sebenzisa ukusebenza okulula, okuzinzile. Kungakhathaliseki ukuthi iphethini elula, imibala egcwele imibala noma ukuxuba amaphethini, ukuphrinta kuphela isikhathi esisodwa, akudingeki ukuba wenze ifilimu ngezinqubo ezimbalwa.
Umshini we-T-shirt wephrinta I-T-Shirt Embala Umbala Omhlophe Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation Umshini wePhrinta yephrinta ye-Ball Umshini wephrinta yebha Umshini wephrinta we-Bag Umshini wephrinta we-T-shirt Umshini wokunyathelisa we-T-Shirt we-T Shirt